people Nepal » आज विश्वआदिवासी दिवस / साउन २५ गते बुधबार को राशिफल हेर्नुहोस् आज विश्वआदिवासी दिवस / साउन २५ गते बुधबार को राशिफल हेर्नुहोस् – people Nepal
आज विश्वआदिवासी दिवस / साउन २५ गते बुधबार को राशिफल हेर्नुहोस्
Posted on August 9, 2017 by Purna Nanda Joshi
आज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल श्राबण २५ गते बुधबार इश्वी सन २०१७ अगस्त ०९ तारीख भाद्र कृष्ण पक्ष द्वितिया तिथी चन्दमा कुम्भ राशिमा सूर्य दक्षीणायन बर्षा ऋतु, रोपाईजात्रा, (दधुसाया यलमताया) विश्वआदिवासी दिवस
नयाँ कामको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । आय आर्जनको लागी राम्रो समय रहेको छ । हरकोहिको पुर्ण बिश्वास नगर्नु होला धोका हुन सक्छ । बाणिमा मधुरता छाउनेछ । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ ।
पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । कष्टकर यात्राको कारणले शारिरिक आलस्यता ले सताउला । पठनपाठनको क्षेत्र भने त्यति राम्रो नरहला । कार्य सम्पादन गर्न बढी परीश्रम र समय ब्यतित हुन सक्छ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त नहुनाले मनमा चन्चलताको बास रहला ।
गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला । अरुको बसमा गरीएको कार्यले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ । दाजु भाई तथा मित्रजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । यात्राकारक दिन रहेकोछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ ।
मान्य जनको साथ सहयोग पुर्ण रुपमा प्राप्त नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । माल सामान को क्षति ब्यहोर्नू पर्ला सजग रहनु होला । प्रीय खबर प्राप्त भएतापनि मनमा कुबिचारको भाब पैदा हुनेछ । शारीरिक अस्वस्थाका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आउन सक्छ ।
तपाईले कसैमाथी गरेको बिश्वासमा बिश्वसघात हुन सक्छ । सामान्य यात्रा रहला । निणर्य गर्ने क्षमतामा कमी आउन सक्छ । भोग बिलास को क्षेत्रमा समय ब्यतित हुनेछ । प्रेमी प्रेमिकाको बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । ब्यापार ब्यवसाय को क्षेत्रमा मध्यम दिन रहेको छ ।
प्रिय ब्यक्ति को भेटले मन प्रशन्न रहला । सामान्य बादबीबादको योग रहेको छ । तपाईका शुभ चिन्तक हरुको सङख्या बढ्नेछ भने शत्रुपक्क्ष कमजोर हुनाले बिघ्नबाधाहरु हट्नेछन् । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला । आजको सामान्य खर्चले भोलिलाई फाईदा मुलक हुनेछ ।
साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ । बौधिक ब्यक्तित्व सँगको भेटघाटले मन हर्सित तुल्याउला । पठनपाठनको क्षेत्र भने अधुरो रहनेछ । पारीवारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला ।
बिशिष्ठ ब्यक्तिहरुको सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । गैर ब्यक्तिको अनुशरण गर्दा प्रिय ब्यक्तिहरु टाढीन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । पारीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मद्दत पूग्नेछ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ ।
मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्र भने राम्रो रहेको छ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ । सामान्य यात्रा हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर रहनेछ । पराक्रममा बृद्यि हुनेछ ।
दीर्घकालिन फाईदा मुलक काममा लगानि लगाउने राम्रो समय रहेको छ तर तत्कालिक आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । खानपानको गडबढीले स्वास्थमा सामान्य बाधा आउन सक्छ । बोलिको कारण आफन्तजनहरु रुष्ट रहन सक्छन् ।
शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । साधारण चोट पटक लाग्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । प्रेमी प्रेमीका बिच खट्पट रहन सक्छ । सामान्य यात्राले मन बैचैन रहला । आम्दनी बृद्वि हुने योग रहेको छ । मनमा सामन्य चिन्ता ले सताउने छ । साजेदारी काममा हात नहाले कै बेस रहने छ ।
ब्यापार ब्यवसायमा सामान्यतय हानि रहन सक्ने छ । कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । तपाईले गरेको कामको फाईदा अरुले लिन सक्छन् । मित्रजनहरुको लागी साधारण खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खराब संंगतको कारणले सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला ।